Mampitsahatra ny fikasana hanakorontana ny fanadihadiana ataon'ny Boeing Max 8 ny Ethiopian Airlines
Home » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina » Mampitsahatra ny fikasana hanakorontana ny fanadihadiana ataon'ny Boeing Max 8 ny Ethiopian Airlines
Hery lehibe kokoa ve sa Boeing ao ambadiky ny tatitra navoakan'ny Washington Post mifototra amin'ny zava-nitranga tamin'ny 2015 talohan'ny nampiasana ny Boeing MAX 8, ary ankehitriny nifangaro tamin'ny fianjerana Ethiopian Airlines. Ny loza dia tsy voka-dratsy eo amin'ny fifandraisam-bahoaka ho an'i Boeing fotsiny fa mety hivadika ady ho amin'ny fahavelomana, hisorohana ny fiampangana heloka bevava ary ny hitazomana ny lazan'ireo orinasa.
Ny WashPoston Post androany dia nitatitra momba ny mpanamory fiaramanidina roa nametraka fitarainana tany amin'ny Federal Aviation Administration momba ny fandaharam-pampiofanana voalaza fa diso sy ny fomba tsy mahomby amin'ny fiarovana any amin'ny Ethiopian Airlines taona talohan'ny nianjeran'ny fiaramanidina Boeing 737 Max tany Etiopia niaraka tamina olona 157 tao anatin'ny herinandro lasa teo, hoy ny federasiona iray. Database fitantanana ny seranam-piaramanidina.
Ny fitarainana 2015, napetraka talohan'ny nampiasana ny Max 8, dia manakiana ny fanofanana sy ny antontan-taratasy fanamoriana ny 737 ampiasaina amin'izao fotoana izao, ary koa ny fiaramanidina Boeing roa lehibe kokoa.
Ny Ethiopian Airlines dia mety miorina amin'ny firenena izay lazain'ny maro fa tontolo fahatelo, saingy ny orinasa dia namaly tamin'ny fomba voalohany, matihanina ary avy hatrany nefa tsy nanondro ny rantsan-tànany.
Androany ny Ethiopian Airlines dia tsy nilatsaka ho an'ny fahefana ambony manandrana manakorontana ny raharaha amin'ny fanadihadiana.
Lasa maika kokoa ve ny fanontaniana? Tsy maintsy nitranga ve ity lozam-pifamoivoizana ity? Mpandeha sy ekipa 156 ve no voatery maty tao anaty fiaramanidina Boeing MAX 8?
Ny fanadihadiana sy ny lesoka dia manondro hatrany ny mpanamboatra amerikana. Ny mpanamory fiaramanidina dia niampanga an'i Boeing ho tsy fitandremana heloka bevava ary tsy toy izany koa ny Ethiopian Airlines. Ny FBI dia tafiditra amin'ny fametrahana raha misy tranga heloka bevava atao amin'i Boeing.
Ny tatitra ao amin'ny Washington Post androany momba ny olana tsy misy ifandraisany amin'ny fanesorana ilay olana eo am-pelatanana dia mety tsy kisendrasendra.
Namoaka fanambarana tao amin'ny lahatsoratra Washington Post ny Ethiopian Airlines androany:
Ny Ethiopian Airlines dia manohitra mafy ireo fiampangana tsy mitombina sy tsy marina voasoratra tao amin'ny Washington Post tamin'ny 21 martsa 2019.
Ny fiampangana rehetra ao amin'ilay lahatsoratra dia fanalam-baraka tsy misy porofo, voaangona avy amin'ny loharanom-baovao tsy fantatra sy tsy azo atokisana ary natao hampiala ny sain'ny olona amin'ny fiorenan'ny fiaramanidina B-737 MAX manerantany.
Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka etiopiana dia miasa miaraka amin'ny fenitra avo lenta manerantany momba ny kalitao sy ny fiarovana azo antoka voamarina amin'ny alàlan'ny mpandrindra nasionaly, isam-paritra ary iraisampirenena toy ny manampahefana sivily sivily etiopiana, FAA, EASA, IOSA ary ICAO ary ireo manampahefana hafa mifehy ny firenena. Iray amin'ireo zotram-piaramanidina manerantany miaraka amin'ny andian-tsambo maoderina, fenitra avo lenta amin'ny fotodrafitrasa i Etiopiana, mandeha ho azy miaraka amin'ny TIC farany (teknolojia fampahalalam-baovao sy fifandraisana) ary iray amin'ireo rafitra miasa maoderina.
Ny kaompaniam-pitaterana dia manana simulator sidina fito feno (Q-400, B-737NG, B-737 MAX, B-767, B-787, B-777 ary A-350) hampiofana ireo mpanamory fiaramanidina sy mpanamory fiaramanidina hafa. Izy io dia iray amin'ireo Akademia Aviation lehibe indrindra sy maoderina indrindra miaraka amin'ny fitaovana fampiofanana sy haitao eo amin'ireo vitsy eto amin'izao tontolo izao. Ny Airline dia nandany vola mihoatra ny antsasaky ny Miliara dolara amin'ny fotodrafitrasa tao anatin'ny 5 taona lasa izay tsy fahita amin'ny zotram-piaramanidina mahazatra.
Na dia mbola tsy ho fantatry ny fanadihadiana iraisam-pirenena aza ny anton'ny lozam-pifamoivoizana, dia fantatr'izao tontolo izao fa ny fiaramanidina B-737 MAX dia niorina hatramin'ny nitrangan'ny loza mahatsiravina nataon'ny ET 302/10 martsa. Manodidina ny 380 ny fiaramanidina B-737 MAX no miorim-paka manerana an'izao tontolo izao, anisan'izany ny Etazonia. Ny mpandrindra rehetra voakasik'izany, ny manampahefana misahana ny fiarovana ary ny maso ivoho mpampihatra lalàna hafa dia manao fanadihadiana matotra momba ny famolavolana sy ny fanamarinana ireo fiaramanidina B-737 MAX ary miandry am-paharetana ny valin'ireo fanadihadiana ireo izahay
Ity no zava-misy, ny lahatsoratra lohahevitra dia manandrana mamily ny fifantohan'izao tontolo izao amin'ny fiampangana tsy misy ifandraisany sy tsy marina.
Izahay izao dia mangataka amin'ny Washington Post hanala ilay lahatsoratra, hiala tsiny ary hanitsy ny zava-misy.
Fizahan-tany any Hawaii: Rams Los Angeles hilalao Dallas Cowboys ao Aloha Stadium
Tonizia dia nanatratra ny UNWTO mba hanesorana ireo torohevitra momba ny dia